El Tocororo, Shimbiraha Qaranka ee Cuba | Safarka Absolut
Tocororo, shimbiraha qaranka ee Cuba
Daniel | | La cusboonaysiiyay 05/11/2020 11:15 | Cuba
El Tocororo waa wax ka badan shimbir uun: waa tan shimbiraha qaranka ee Cuba. Tani waxay ka dhigan tahay inay qayb ka tahay astaamaha qaran ee dalkan oo ay weheliso ubax balanbaal, timirta boqortooyada ama calanka Cuba lafteeda, caanka ah Demajagua.
Magaca cilmiyaysan ee xayawaankan qaaliga ahi waa Priotelus temnurus waxaana iska leh isla qoyska sida quetzals-ka. Si kastaba ha noqotee, jasiiradda waxaa loo yaqaan 'tokororo' ama sidoo kale sida tocolour. Magacani wuxuu ka yimid dhawaaqa heeskooda, oo onomatopoeia loo soo saari karo sidan: «to-co-ro-ro». Qeybo ka mid ah jasiiradda, gaar ahaan qeybta bari, waxaa lagu yaqaan magaca guatiní, ereyga asalka Taino.
Marka laga eego dhanka ornithological-ka waa nooc aad u xiiso badan, maadaama ay tahay a endemism. Tookorowga wuxuu kaliya ku nool yahay Cuba: jasiiradda weyn, iyo jasiirado yaryar sida Guanaja Cay, Isle of Youth y Sabinal Cay.
Maxaa Tocororo loogu tixgeliyaa shimbiraha qaranka Cuba? Sababaha waa laba:
Dhinac marka laga eego, xuubkeeda riyooyinka leh ayaa leh midabbada la mid ah calanka Cuba. Dhinaca kale, way dhacdaa taas suurta gal ma ahan in shimbirtaan la haysto. Marka Tocororo la xiro, wuxuu joojiyaa heesaha, wuu joojiyaa cunida, wuxuu lumiyaa caarada qaaliga ah waxaana loo ogolaadaa inuu si tartiib ah u dhinto. Sifadaas waxaa loo fasirtay inay tahay wanaag: Tocororo wuxuu jecel yahay xorriyadda iyo wuxuu matalayaa ruuxda xorta ah ee dadka Cuba.
1 Astaamaha Tocororo
2 Hoyga iyo caadooyinka Tocororo
3 Ilaalinta iyo dhawrista
Tocororo waa shimbir dhexdhexaad ah oo dhererkeedu u dhexeeyo 27 iyo 29 sentimitir. Dabogeedu wuu dheer yahay, qiyaas ahaan wuxuu qiyaasaa jirka intiisa kale. Baalal fidsan ayaa shimbirtan waxay ku gaari kartaa ku dhowaad 40 sintimitir baal ahaan.
Midabada caarada Tocororo waxay lamid tahay kuwa calanka Cuba
Dabada Tocororo waxay ka kooban tahay baalal dhaadheer oo fiiqan oo ku sameeya dhamaadka qaabkeeda miinshaar. Indhahoodu waa casaan, halka afku ka madow yahay xagga sare iyo gunta hoose. Ciddiyahoodu waxay la mid yihiin kuwa shimbiraha ee qoyska Trogonidae
Waxa ugu xiisaha badan ee ku saabsan muuqaalka jireed ee Tocororo waa toobkeeda midabada leh. Dusha sare iyo xagga dambe ee madaxiisu waa buluug-buluug, halka dhabarka iyo dabadu ay yihiin cagaar madow oo dhalaalaya. Dhanka kale, baalasha qoorta iyo laabta waa cadaan ama cirro cirro leh, laakiin caloosha iyo salka dabada waa casaan aad u dhalaalaya. Tani waa halabuurka koromatikada ee caarada ragga. Dheddigga waa la aqoonsan karaa maxaa yeelay laabtooda sidoo kale waa casaan, mana u caddaan sida tan ragga. Tani waa ficil ahaan kaliya farqiga udhaxeeya labada jinsi.
Waxaa jira laba nooc laga bilaabo Tocororo ee Cuba:
Priotelus temnurus temnurus, kan ugu caansan uguna baahsan jasiiradda oo dhan.
Priotelus temnurus vescus, ayaa la soo daabacay markii ugu horreysay sanadkii 1905 waxaana lagu degay Isle of Youth oo keliya. Waxay la mid tahay noocyada kale, inkasta oo cabirkiisu xoogaa yar yahay.
Hoyga iyo caadooyinka Tocororo
Tocororo-ku wuxuu ku sugan yahay ku dhowaad kaymaha dalka oo dhan, in kasta oo ay u fududahay in laga helo kuwa caleenta badan leh oo leh geedo leh taalooyin dhaadheer. Aad ayuu ugu badan yahay nuska bari ee Cuba: Sierra de los Órganos, the Ciénaga de Zapata, the Sierra del Escambray iyo buuraha Sierra Maestra.
Badanaa waxaa la yiraahdaa Tocororo waa shimbir deggan. Wuxuu in badan oo maalinta ah ku lumiyaa ku tiirsanaanta laan, qoortiisu hoos ayey u foorarsataa, oo ay seexataa. Xaqiiqdii, waxay u dhaqaaqdaa oo kaliya inay nafteeda quudiso, taasi waa marka ay muujiso inay awood u leedahay duulimaadyo degdeg ah iyo dhaqdhaqaaqyo dhaq-dhaqaaq ah. Waxay quudataa miraha iyo cayayaanka yaryar.
Astaamihiisa aadka u badan canto (caanka ah "to-co-ro-ro"), oo badanaa lasocda crinching iyo oohin. Gudaha video dusha sare waad ka bogan kartaa dhawaaqan gaarka ah.
ka caadooyinka taranka shimbirtan ayaa ah mid aad u xiiso badan. Haweeneyda loo yaqaan 'Tocororo' waxay ukunta dhigtaa inta u dhexeysa bilaha Abriil iyo Julaay, iyadoo had iyo jeer ku jirta 3 ama 4 ukun. Waxa ugu cajaa’ibka badan waa caado ay leeyihiin inay ku jiifsadaan buulleyda dadka kale, guud ahaan kuwa xaabada ka xareeya. Ukunta waxaa si aan kala sooc lahayn labadooda iyo dheddiggooda u soo saaray. Dhalashada kadib, hawsha quudinta dhalinyarada sidoo kale waxaa wadaaga labada jinsi.
Ilaalinta iyo dhawrista
Dowladda Cuba waxay ansixisay sharci 1999 kaasoo mamnuucaya ugaarsiga iyo qabashada Tocororo. In kasta oo noocyada aan khatar gelin ama loogu hanjabin dabargoyn, haddana waxaa loo tixgeliyaa a shimbir qalaad ilaashan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, cabirkan ilaalinta sharciga ah ayaa ka astaan ​​badan waxqabadka, maaddaama Tocororo uu yahay mid ka mid ah xayawaanka aadka loo jecel yahay loona qaddariyo ee xoolaha dalka. Kuubaanku waxay u jecel yihiin Tocororo kaliya quruxdeeda iyo heesteeda, laakiin sidoo kale waxay u jecel yihiin xaaladdeeda Shimbiraha Qaranka, oo astaan ​​u ah aqoonsiga Cuba. Waxyeellaynta xayawaankan waxaa loo tixgeliyaa inaysan wax dembi ka ahayn dalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Tocororo, shimbiraha qaranka ee Cuba